တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နီပေါနိုင်ငံသမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း) » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၉
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ နီပေါနိုငျငံသမ်မတနှငျ့တှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ အိန်ဒိယတပျမတျော ဒုတိယရတေပျဦးစီးခြုပျအား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော၊ အောကျတိုဘာ ၁၇
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဧည့်သည်တော် နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mrs. Bidya Devi Bhandari နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံ
ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ Mr. Xi Jinping နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၇ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi Baharim ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA တို့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
မတ် ၁၉၊ ၂၀၂၀ Admin 0